केके निवेदन पेश गर्नुपर्छ होला ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७५-०१-४ बिचार / प्रतिक्रिया
म अमेरिकामा डिभी लटरी परेर २ वर्षअगाडि आएको हुँ । गत सालको डिसेम्बरमा नेपाल गएँ र मेरो विवाह पनि भयो । दुई महिना नेपाल बसेर अमेरिका फर्केर आएँ । मेरो श्रीमान् नेपालमा नै हुनुहुन्छ । त्यसैले मैले मेरो श्रीमान्लाई अमेरिका ल्याउनका लागि के गर्नुपर्छ होला ? केके निवेदन पेश गर्नुपर्छ होला ?
– राधिका, अमेरिका
तपाईंको श्रीमान्लाई अमेरिका ल्याउनका लागि आई–१३० एलियन रिलेटिभ पेटिसन फायल युएससीआईएसमा गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईं अहिले ग्रीनकार्ड होल्डर मात्र भएकाले इमिग्रान्ट भिसाका लागि पालो कुर्नुपर्ने हुन्छ । आई–१३० पेटिसन स्वीकृत भएर इमिग्रान्ट भिसाको पनि पालो आएको खण्डमा नेशनल भिसा सेन्टरमार्फत कन्सुलर प्रोसेसिङ गरी सबै कुराको रीत पुगेको खण्डमा तपाईंको श्रीमान्ले युएस एम्बेसी नेपालमा इमिग्रान्ट भिसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । आई–१३० पेटिसन यथाशीघ्र फायल गर्नु भए राम्रो हुने सुझाव छ ।
म ६ महिनाअघि मेक्सिको बोर्डर भएर अमेरिका पसेको थिएँ । नेपालमा विभिन्न समस्या भएर म अमेरिका आएको हुँ । धेरै मेक्सिको बोर्डबाट आउनेहरुलाई इमिग्रेसन एजेन्टहरुले बाटोमा नै समाती थुन्ने गरेको र त्यसैबेला उनीहरुले एसाइलमको निवेदन गर्ने गरेको थाहा पाएँ । साथीहरुसँग सल्लाह गर्दा विभिन्न किसिमको सुझावहरु र समस्याहरुको कुरा गरे । तर, ठोस सल्लाह पाउन सकिएन । एसाइलमको निवेदन आएको दिनदेखि १ वर्षभित्रमा गर्नुपर्छ भन्ने सुनेको छु । अब मेरो केसको हकमा कहिलेको मितिबाट मेरो १ वर्षको म्याद शुरु हुन्छ र कहिलेसम्ममा निवेदन फायल गर्नुपर्छ होला । सुझावका लागि धन्यवाद ।
– आशिष, अमेरिका
तपाईं मेक्सिकोबाट विना अरेस्ट अमेरिका पस्न सफल हुनु भए पनि तपाईंले इन्ट्री गरेको दिनदेखि १ वर्षको समय शुरु हुन्छ । चाहे लिगल्ली वा इलिगल्ली जसरी अमेरिकामा इन्ट्री भए पनि इन्ट्री भएको दिनदेखि तपाईंको १ वर्षको म्यादको गन्ती शुरु हुन्छ । एसाइलम अफिसमा वा इमिग्रेसन कोर्टमा तपाईंले तपाईं कुन दिनमा अमेरिका प्रवेश गरेको हो, त्यो साबित गर्नुपर्नेछ । यदि तपाईंले सबुत प्रमाणको आधारमा कुन दिनमा तपाईं अमेरिका प्रवेश गरेको र त्यस दिनदेखि १ वर्षभित्रमा एसाइलमको निवेदन दाखिल गरेको प्रमाणित गर्न सक्नुभएन भने तपाईंको एसाइलमको निवेदन प्रिटर्मिट हुनेछ । यदि त्यस्तो स्थिति आएमा फेरि पनि विथहोल्डिङ अफ रिमोभलको एप्लिकेसनका लागि लड्न सक्नु हुनेछ । एसाइलम एप्लिेकसनको प्रोसेस जटिल भएकाले अनुभवी एटर्नीको सहयोग लिन सुझाव छ ।